Transformation (2) Days Intensive at MBA Myanmar Business Academy, Yangon
Transformation (2) Days Intensive
Time Sat Jul 21 2018 at 09:00 am to Sun Jul 22 2018 at 06:00 am
Venue MBA Myanmar Business Academy, C-913 Mudita Condo, Middle Baho Road, Yangon, 11062, Yangon, Burma
Created by Nay Research Global Follow Contact Promote Your Event
(Transform Your Life Forever, Personal Growth and Development)
တိုးတက်ချင်တာလား? ကြီးပွားချင်တာလား? အောင်မြင်ချင်တာလား? ပြောင်းလဲမှုအစစ်ကိုလိုချင်တာလား? ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝကိုလိုချင်တာလား? လူတော်လူကောင်း ဖြစ်ချင်တာလား? အကြောက်တရားတွေကို
မောင်းထုတ်ချင်တာလား? မိမိဘဝ တန်ဖိုးနဲ့ နေရာမှန်ကိုရှာဖွေချင်တာလား? ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ ဘဝနေထိုင်ရှင်သန်မှုပုံစံကို Version အသစ်ဖြစ်အောင် ရေးဆွဲမြှင့်တင်ချင်တာလား? သင့်ဘဝဟာ ခမ်းနားဖို့ အခွင့်အရေးရှိလျှက်နဲ့ ဖြစ်သလိုမနေပါနဲ့ နိုးထပါ၊ တက်ကြွစွာနေထိုင်ပါ၊ ကမ္ဘာမြေကို မိမိစွမ်းနိုင်သလောက်နဲ့ ဖေးမပါ။ မိမိကိုယ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖို့နဲ့ မိမိကိုယ်ကို အားအင်ဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ Transformation သင်တန်းကို လာခဲ့ပါ” လို့ သတင်းကောင်းပါးပါရစေ။
TRANSFORMATION (2 Day) Intensive in Yangon Area
Transformation သင်တန်း ဆိုတာဘာလဲ.?
Transformation ဟာ လူအများရဲ့ ထူးချွန် ထက်မြက်မှုနှင့် ဘဝအောင်မြင်ရေးနည်းဗျူဟာများကို မိတ္တူကူးခြင်းသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်တန်းဟာ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ဘဝကို ချမ်းမြေ့ပြေလွင်စွာနေထိုင်ရေးအတွက် အောင်မြင်သူများ၏ ထူးချွန်မှု နည်းဗျူဟာများကို စနစ်တကျ Research ပြုလုပ်ပြီး၊ အထူး Design ထုပ်ကာ ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဘယ်လောက် အောင်မြင်နေလဲဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး ဘာကြောင့်ဆို ဘဝမှာ လူတွေဟာ ပျော်ရွှင်မှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ ပြီးပြည့်စုံမှုကိုရှာဖွေနေကြတာဖြစ်လို့ သင်ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ သင်သွားချင်တဲ့နေရာရဲ့ကြားမှာ ကွာခြားမှုတွေရှိနေပါသေးတယ်။ လက်ရှိသင်ဟာ အကောင်းကနေ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Transformation သင်တန်းက သင့်ကို အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်း ပေါ်အမြန်ရောက်ရှိနိုင်ဖို့ အရှိန်မြှင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။ Transfomation သင်တန်းဟာ သင့်ကိုယ်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ ပါရမီဓါတ်ခံနဲ့ အရည်အချင်းများကို ထွက်ပေါ်လာအောင်ဆွဲထုတ်ပေးကာ သင်လိုချင်တဲ့အရာကို ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်အောင် လမ်းဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ဖန်တီးရေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝမှာ Motivation ရှိချင်တာလား. ? Inspiration ဖြစ်ချင်တာလား.? Passion ဖြစ်ချင်အပြည့်နဲ့ အလုပ်လုပ်ချင်ပါသလား..? ထိရောက်ပြီး အကျိုးများတဲ့ Life & Business Result ကိုလိုချင်ပါသလား.? ဘဝလမ်းကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ပြီး အတိုက်အခိုက်များကို ဖြိုခွင်းကာ ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းချင်တာလား? ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆို Transformation ဟာ သင့်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
What will you learn from TRANSFORMATION.?
✔️ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်လာစေမည့်နည်းလမ်းများ၊ အကြောက်တရားကျော်လွှားနည်းများ
✔️ ထူးချွန်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်သူဖြစ်လာစေမည့်နည်းလမ်းများ၊ မဟာဗျူဟာကျကျ စဉ်းစားတွေးခေါ်နည်းများ
✔️ မြင်မှု၊ ကြားမှု၊ ခံစားမှုများကို သင်ခန်းစာယူကာ အသုံးချပြီး ထူးချွန်အောင်လုပ်နည်းများ
✔️ 5th Laws of Human Excellence, T. TAR Model, Goal Setting for SMART People
✔️ Cause & Effect,4Things That END Suffering, 21 Day Habit Change Calendar
✔️ Presupposition or Beliefs of Excellence, Perceptual Position, SWITCH Pattern
✔️ Overcoming the Procrastination, 45 tips of Excellence, Strategic thinking Skills, Removing the4Clouds and creating New Empowering Beliefs
✔️ Communication Keys - Modelling, Rapport Building, Man & Mission, Unleash the Human Potential, Vision Board, and more………………
စတဲ့ အထူးသင်ခန်းစာပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့ TRANSFORMATION သင်တန်းကို အခုပဲ အမြန် စာရင်းပေးသွင်း မှစိတ်ချရမှာပါ။
TRANSFORMATION Intensive ကို ဘယ်သူတွေ တက်ရောက်သင့်လဲ။
စွန့်ဦးတီထွင်လူငယ်များ, လုပ်ငန်းရှင်များ, HR / Admin Manager, CEO & Founders,
လုပ်ငန်းတွင် ရာထူးကြီးကြီး ရလိုသူများ၊ လုင်ငန်းတွင်ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်နေသူများ ၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဖြစ်လိုသူများ၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၊ Professional Carrier များတွင် အောင်မြင်လိုသူများ၊
ဘဝမှာ လက်ရှိထက်ပိုပြီး အောင်မြင်မှုများ ရယူပိုင်ဆိုင်လိုသူများ၊ Powerful Tools and Excellent Technics များကို စနစ်တကျ သင်ယူပြီး လက်တွေ့ အသုံးချလိုသူများ၊ လုပ်ငန်း ခွင်၌ ယခုထက်ပိုမိုပြီး အောင်မြင်မှု အအခွင့်အလမ်းရယူလိုသူများ၊
အောင်မြင်ချင်ပြီး အချိန်ဆွဲတတ်သောအလေ့အကျင့်ကို ဖျောက်လိုသူများ၊ မိမိ ကိုယ်ကို ၁၀၀% ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်လိုသူများ၊
အချိန်ကိုအလေးထားပြီး ပန်းတိုင်ကိုမမျက်ခြေပြတ်မသွားအောင်၊ အောင်မြင်သည်အထိ အလုပ်လုပ်လိုသူများ၊
ဘဝရည်မှန်းချက်ကြီးမားပြီး အကျင့်ဆိုးများတွင် ပိတ်မိနေကာ အကျင့်ကောင်းသို့ ရုန်းထွက်ချင်သူများ။
ကိုယ့်ဝါသနာအမှန်ကို ရှာဖွေလိုသူများ၊ မိမိဝါသနာနှင့် အကျင့်ကိုအသုံးချပြီး အောင်မြင်မှုရရှိရန် ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအား (Personal Power)တည်ဆောက်လိုသူများ၊ လူတကာချင်ခင်ပြီး၊ အောင်မြင်မှု နယ်ပယ်တွင် စံနမူနာထား လေးစားအားကျရသူ ဖြစ်ချင်သူများ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
သင်တန်းပြီးဆုံးပါက MBA Myanmar Business Academy မှ
✔️ အသိအမှတ်ပြု သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် Certificate ပေးအပ်ပါမည်။
✔️ Bonus Services: ☕ (ကော်ဖီ၊ အအေး ၊ မုန့် ၊ workbook များ ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်)
⛔️ ဘဝကမလွယ်ဘူး၊ အရမ်းခက်တယ်။ ⛔️ သွားမလုပ်နဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။
⛔️ လောကကြီးကမတရားဘူး။ ⛔️ လူတွေက မြေနိမ့်ရာလှံစိုက်ကြတယ်။
ဒါဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားနေကျ စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အမြဲငြီးတွားနေရင်တော့ သင့်ဘဝဟာ ဘယ်တော့မှတောက်ပြောင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေးအခေါ် ပြောစကားနဲ့လုပ်ရပ်တွေက အဲဒီလူရဲ့ဘဝကို ဒီဇိုင်းထုတ်ကာ ပုံဖော်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဆီက + အပြုသဘောတွေထုတ်လွှင့်ရင် သင့်ဘဝဟာအပြုသဘောဆောင်ပြီး သာယာလှပလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် - အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ စကားလုံးတွေအတွေးအခေါ်တွေထုတ်လွှင့်နေရင်တော့ သင့်ရဲ့ ဘဝဟာ စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေမှာဖြစ်ပြီး၊ သာယာပျော်ရွှင်မှုနဲ့ လောကအလှတရား အစစ်ကို ဘယ်တော့မှ ရှာဖွေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘဝမှာ မိမိရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ ပြောစကားနဲ့ အလုပ်တွေကို ပြောင်းလဲနိုင်ရင် သင့်ရဲ့ဘဝဟာ လှပခမ်းနားတဲ့
Transformation သင်တန်းတက်ပြီး ဘာတွေ အကျိုးအမြတ်ရရှိမှာလဲ.?
စိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်ဖြင့် သင်တန်းတွင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တက်ရောက်ပြီး သင်ကြားမှုများကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါက
မိမိရဲ့ အလုပ်နဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အံသြစရာကောင်းလောက်အောင် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု တွေတိုးတက် ခိုင်မာလာမယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ Business နယ်ပယ်မှာ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတိုးတက် ထူးချွန်လာမယ်၊ မိမိသွားချင်တဲ့ ဘဝပန်းတိုင်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် သွားလာနိုင်ပြီး၊ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြီးမြောက်အောင် အကောင်ထည်ဖော်တတ်လာမယ်၊ မိမိရဲ့ ဝါသနာနဲ့ ထူးချွန်မှုတွေကို သိရှိနားလည်ပြီး အကောင်ထည်ဖော်တတ်လာမယ်၊ တော်လာမည်၊ တက်ကြွသူဖြစ်လာမည်၊ တွေဝေတတ်သောအကျင့်များပျောက်လာမည်၊
ပျင်းရိလေးလံပြီး အချိန်ဆွဲတတ်သောအကျင့်များပျောက်လာမည်၊ အကောင်းမြင်စိတ်၊ အမှန်မြင်စိတ်များ ထက်သန်လာမည်၊
မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားကို ဆွဲထုတ်ပြီး၊ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအစစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလာပါလိမ့်မယ်။
သင်ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်လာဖို့ အောင်မြင်သူတွေဆီကနေ ဘယ်လို စံနမူနာတွေ ယူသင့်တယ်ဆိုတာ သိရှိလာမယ်။ မိမိလက်အောက်ငယ်သားများရဲ့ Role Model ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် နေထိုင်တတ်လာမယ်။
မိမိပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကမ္ဘာမြေကိုချစ်ခင်တတ်လာမည်၊ Negative Thinking များပျောက်ကင်းပြီး Positive Learning ဖြင့်ကြည့်တတ်လာမည်၊ အမှားအမှန် ဆင်ခြင်နိုင်သော ဥာဏ်ရည်မြင့်မားလာမည်၊ ဒီသင်တန်းဟာ သင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးမယ့်အပြင်၊ ဘယ်တော့မှ မေ့မရနိုင်တဲ့ သင်တန်း တစ်ခု ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ရင်း . . .
YOUR FRIEND > ကိုနေ
TRANSFORMATION (2 Days) Boot Camp
☑️ Upcoming Event in Yangon
? ? နေ့ရက် ။ ။ July 21-22, 2018 (2 Days)
⏰ ⏰ အချိန် ။ ။ နံနက် (၉) နာရီ မှ ညနေ (၆) နာရီ အထိ
? ? နေရာ ။ ။ MBA Myanmar Business Academy, C- 913, Mudita Condo, Middle Baho Rd, Mayangone, Yangon.
MBA သင်တန်းကျောင်း၊ အမှတ် (913)၊ C.ဆောင်၊ မုဒိတာကွန်ဒို၊ အလယ်ဗဟိုလမ်း၊ မရမ်းကုန်း၊ ရန်ကုန်။
????? Normal Price ? ပုံမှန် သင်တန်းကြေးမှာ - ၂၅၀, ၀၀၀/- နှစ်သိန်းငါးသောင်းကျပ်။ ဖြစ်ပြီး ????
???? Promotion Pice ? ယခု Promotion ကာလဖြစ်သောကြောင့် -၁၀၀,၀၀/-တစ်သိန်းကျပ်သာ။
??? Early Bird ? ပထမဆုံးအပ်နှံသူ (၁၀)ဦးအတွက် ၆၀,၀၀၀/ခြောက်သောင်းကျပ်သာကျသင့်ပါမည်။
Seats are very limited, please contact now for registration.
Boot Camp ဖြစ်သောကြောင့် သင်တန်းသား (၃၀)သာ ကန့်သတ်ထားသည့်အတွက် ဦးရာလူစနစ်ဖြစ်ဖြင့် လက်ခံသွားပါမည်။
(ယခုကဲ့သို့ Design ဆွဲထားသော Event မှာ၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဈေးနှုန်း အလွန်များပါသည်၊ ဥပမာ- Tony Robbins ၏ သင်တန်းသည်။ USD $ 1000 မှ $ 3000 အထိရှိပြီး။ မြန်မာငွေ ကျပ် (၁၃) သိန်း မှ ကျပ်သိန်း (40) ခန့်ရှိပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ယခုဈေးနှုန်းဖြင့် လေ့လာခွင့်ရသောကြောင့် သင်တန်းသည် နိုင်ငံတကာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်တန်သော ဈေးနှုန်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပါမည်။ အောင်မြင်မှုကို ဆာလောင်နေသော သင့်အတွက် မှန်ကန်သော ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ )
နိုင်ငံတကာ သင်တန်း ဈေးနှုန်းများကိုလေ့လာလိုပါက links : https://www.tonyrobbins.com/events/unleash-the-power-within/chicago-07-12-2018/#pricing) ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)
ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် နံပါတ်(၄) စာရင်းဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ (Investor)ဖြစ်တဲ့ Warren Buffett က
“ကျနော့်ဘဝမှာ အကောင်းဆုံးရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုတစ်ခုက Dale Carnegie ရဲ့ သင်တန်းကို တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်”လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအချိန်ဟာ သင့်အတွက် သင်တန်းတက်ရင်း ဦးနှောက်မှာ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်”လို့ သတင်းကောင်းပါးပါရစေ။
သင်တန်းကို စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိပါက သင်တန်းနောက်ဆုံးနေ့တွင် ၁၀၀% ငွေပြန်အမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
? 09 764 764 105, 099 7733 9292
? Email: bWJhICEgaW5mbyAhIG5yZyB8IGdtYWlsICEgY29t
? U NAYZAW TUN
KBZ Bank : 9993 0704 5021 36301
CB Bank : 0087600 10000 5169
♻️ Your High-Performance Trainer Profile
?? NAYZAW TUN
? Author | Speaker
? Social Entrepreneur
? #1 Life & Business Coach
? CEO & Founder of MBA Myanmar Business Academy
For more: www.facebook.com/nayzawtunpage
Facebook: MBA Myanmar Business Academy
You haveaneed, we haveasolution.
Also check out other Nonprofit Events in Yangon, Arts Events in Yangon, Business Events in Yangon.
Map MBA Myanmar Business Academy, C-913 Mudita Condo, Middle Baho Road, Yangon, 11062, Yangon, Burma
Nay Research Global
AMAUT Business Networking Party
Lesmills launch Q3